November 2021 – Cele News TV
လူတျောတျောမြားမြားကို မုနျ့ဟငျးခါး အဝကြှေးခဲ့တဲ့ မငျးသမီး ခိုငျနှငျးဝေ
November 30, 2021 100million 0
ပွညျသူ့အခဈြတျော ပရဟိတ မငျးသမီး ခိုငျနှငျးဝဟော သူမကိုခဈြတဲ့ ပရိသတျတှနေဲ့အတူ အလှူဒါနမြား စုပေါငျးလုပျလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီတဈခါမှာလညျး ခိုငျနှငျးဝေ ပရဟိတဂဟောနဲ့ ခုနဈရကျသားသမီးကောငျးမှုဆိုပွီး လမျးနဲ့ ရအေိုးစငျလေး ဆောကျလုပျလှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မနကေ့ လမျးနဲ့ ရအေိုးစငျဖှငျ့ပှဲလေးမှာ ရပျကှကျနေ ပွညျသူမြားအတှကျ မုနျ့ဟငျးခါး စတုဒိသာ ကြှေးမှေး ကုသိုလျယူခဲ့ပါတယျလို့ […]
အရမျးခဈြရတဲ့ဇနီးလေးဖွဈသူရဲ့ ကနျြးမာရေးအခွအေနကေို ပွောပွလာတဲ့ သရုပျဆောငျဘုနျးလြံ့
ကိုယျဝနျပကျြကသြှားပမေ့ယျ့ဇနီးဖွဈသူရဲ့ကနျြးမာရေးအခွအေနကေိုပွောပွလာတဲ့သရုပျဆောငျဘုနျးလြံ့ ပရိတျသတျကွီးရေ၊အခုတဈခါမှာဆိုရငျသရုပျဆောငျဘုနျးလြံ့ကကိုယျဝနျပကျြ ကသြှားပမေ့ယျ့ဇနီးဖွဈသူရဲ့ကနျြးမာရေးအခွအေနကေိုအခုလိုပွောပွလာခဲ့ပါတယျနျော။ သရုပျဆောငျဘုနျးလြံ့ကကိုယျတှနှေဈယောကျအတှကျစိတျမကောငျးဖွဈပေးကွတဲ့သူမြားအားလုံးကိုကြေးဇူးတငျပါတယျနျော၊အခုမလေဲကနျြးမာရေးကောငျးမှနျနပေါပွီနျော။ ရခိုငျပွညျမွောကျဦးမွို့အလှအပကိုစိ တျကွညျ နူးစှာခံစား နိုငျဖို့လိုကျပွမိ ပါတယျဆိုပွီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျထကျမှာရေးသားဖျောပွထားပါတယျ၊စာဖတျပရိတျသတျကွီးမြား အတှကျပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ Zawgyi vision ပရိတျသတျကွီးရေ၊အခုတဈခါမှာဆိုရငျသရုပျဆောငျ ဘုနျးလြံ့ ကကိုယျ ၀နျပကျြကသြှားပမေ့ယျ့ဇနီးဖွဈသူရဲ့ကနျြးမာရေးအခွအေနကေိုအခုလိုပွောပွလာခဲ့ပါတယျနျော။ သရုပျဆောငျဘုနျးလြံ့ကကိုယျတှနှေဈယောကျအတှကျစိတျမကောငျးဖွဈပေးကွတဲ့ သူမြားအားလုံးကိုကြေးဇူးတငျပါတယျနျော၊အခုမလေဲကနျြးမာရေးကောငျးမှနျနပေါပွီနျော။ ရခိုငျပွညျမွောကျဦးမွို့အလှအပကိုစိတျကွညျနူးစှာခံစားနို ငျဖို့လို ကျပွမိပါတ ယျဆိုပွီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျထကျမှာရေးသားဖျောပွထားပါတယျ။ Credit […]
အဖမျးခံထားရတဲ့ သူငယျခငျြးဖွဈသူ ပွတေီဦးရဲ့ မှေးနလေ့ေးမှာ အလိုခငျြဆုံးဆုတဈခုကို စိတျမကောငျးစှာ တောငျး ဆုပနျပေးခဲ့တဲ့ ညီနန်ဒ
အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျမှုတှနေဲ့ လြှောကျလှမျးနတေဲ့ ပွတေီဦးကတော့ လကျရှိမှာ ပွညျသူပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှကေိုအပွညျ့အဝရရှိထားပွီး လေးစားရတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျ ဖွဈလာခဲ့ပါပွီ။ ပွတေီဦး ဟာ နှဥေီးတျောလှနျရေး လူထုလှုပျရှားမှုကာလတှမှော ပွညျသူတှနေဲ့ တဈသားတညျးရပျတညျပွီး တကျကွှစှာ ပါဝငျလှုပျရှားမှုတှကွေောငျ့ ၅၀၅(က) ဖွငျ့ အမှုစှဲဆိုခံရပွီး ဇနီးဖွဈသူ အိန်ဒွာကြျောဇငျ နဲ့အတူ ဖမျးဆီးခြုပျနှောငျခံခဲ့ရတာ […]
Asian Amazing Culture & Community မှာ နိုင်ငံတကာအနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူ ဖော်ပြခံခဲ့ရတဲ့ ပိုင်တံခွန်နဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
Asian Amazing Culture & Community မှာ နိုင်ငံတကာအနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူ ဖော်ပြခံခဲ့ရတဲ့ ပိုင်တံခွန်နဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည် သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်နဲ့ အကယ်ဒမီ ဝတ်မှုံရွှေရည်တို့ကတော့ အားပေးသူပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ပိုင်တံခွန်ဟာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့် အကျဉ်းထောင်ထဲကိုရောက်ရှိနေသလို ဝတ်မှုံရွှေရည်ကလည်း နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေကြားမှာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်တံ့ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေမလုပ်ကိုင်တာ […]
ဒေါင်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “ကျောက်ဖရားမှ ဧရာဝတီသို့ ” ဇတ်လမ်းတွဲမှ အမှတ်တရ ပုံရိပ်လေးများ
ဒေါင်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “ကျောက်ဖရားမှ ဧရာဝတီသို့ ” ဇတ်လမ်းတွဲမှ အမှတ်တရ ပုံရိပ်လေးများ အနုပညာနယ်ပယ်မှာ အချိန်အတိုတွင်း အောင်မြင်လာခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အပြည့်အဝရရှိထားခဲ့တဲ့ သူကတော့ ပြည်သူ့ မင်းသား ​ဒေါင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါင်းဟာ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ နေတတ်တဲ့သူဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း အပြစ်ပြောစရာမရှိလောက်အောင် ထူးချွန်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
သမီးရညျးစားပွဿနာတှကွေားမှာ မဆီမဆိုငျပါ လာလို့ စိတျဆိုးနကွေတဲ့သူ တှကေို နှဈသိမျ့စကားဆိုလိုကျတဲ့ အောငျမငျးခနျ့
သရုပျဆောငျ အောငျမငျးခနျ့ကတော့ လတျတလောမှာ ပရိသတျတှရေဲ့ အာရုံစိုကျခွငျးခံနရေသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ အကွောငျးကတော့ အောငျမငျးခနျ့ဟာ Double Dating အစီအစဉျထဲက သူ့ရဲ့ပါတနာ သရုပျဆောငျ ယှနျးယှနျးနဲ့ စညျသူဝငျးတို့သမီးရညျးစားရဲ့ လှုမှုရေးပွဿနာတှကွေောငျ့ပဲဖွဈပါတယျ။ စညျသူဝငျးရဲ့ခဈြသူ မွတျနိုးအိမျတငျထားတဲ့ စညျသူဝငျးနဲ့ ယှနျးယှနျးတို့ပွောတဲ့ Conversation ထဲမှာ ယှနျးယှနျးဟာ စညျသူဝငျးရဲ့ခဈြသူဖွဈနတောကွောငျ့ စညျသူဝငျးအရှမှေ့ာ […]
ခါးအရိုးကျိုးထားတဲ့ ဒဏ်ရှိနေပေမယ့်လည်း သမီးနှစ်ယောက်ကိုချီပြီး အိမ်ကိုစွန့်ခွာပြေးခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ချစ်သုဝေနဲ့ လင်းလင်း
ခါးအရိုးကျိုးထားတဲ့ ဒဏ်ရှိနေပေမယ့်လည်း သမီးနှစ်ယောက်ကိုချီပြီး အိမ်ကိုစွန့်ခွာပြေးခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ချစ်သုဝေနဲ့ လင်းလင်း သရုပ်ဆောင်ချစ်သုဝေကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်းရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ပြည်သူချစ်မင်းသမီးတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သမီးလေးနှစ်ယောက်ေ.မွးဖွ.ားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေရို.က်ကူးခြင်းမရှိတော့ဘဲသီချင်းဘက်ကိုသာ ဇောက်ချလုပ်ကိုင်ဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ကိစ္စမဆိုပြည်သူတွေနဲ့တစ်သားတည်းရပ်တည်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးရဲ့ချီးကျုးမှုတွေကိုရရှိထားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချစ်သုဝေဟာလက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောမပြတတ်အောင်ကိုဝ.မ်းန.ည်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေအတွက်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်သရုပ်ဆောင်ချစ်သုဝေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နေ့ကစပြီးခ.ါးအရု.ိးကျိ.ုးနေပေမယ့်လည်းသမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုချီကာထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်း၊(၈၈)အရေးအခ.င်းတုန်းကသူက (၄)နှစ်အရွယ်ဖြစ်ခဲ့သလိုအခုအာဏာသိ.မ်းခံလိုက်ရချိန်မှာလည်းသမီးလေးနှစ်ယောက်က(၄)နှစ်အရွယ်လေးတွေဖြစ်တာကြောင့်သမီးလေးတွေအတွက်စိ.တ်မကော.င်းအတော်လေးဖြစ်မိကြောင်း၊ မိဘနှစ်ပါးရဲ့တော်လှန်ရေးစိတ်ဓါတ်ပြ.င်းထ.န်မှုကြောင့်သမီးလေးတွေဒု.က္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းတွေကိုပြောပြလာပါတယ်။ တော်လှန်ရေးဘယ်အချိန်အောင်မြင်မလဲဆိုတာမသိချင်ဘူးအာဏာရှင်အမြ.စ်မပြ.တ်သရွေ့တွ.န်းလှန်သွားမယ်-လင်းလင်းဆိုပြီးပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။မြန်မာပြည်ကြီးလဲအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပြီးဖတ်ရှု့ပေးကြတဲ့မြန်မာပြည်သူ/သားများအားလုံးစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွ.တ်မြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ Credit UNICODE ခါးအရိုးကြိုးထားတဲ့ ဒဏျရှိနပေမေယျ့လညျး သမီးနှဈယောကျကိုခြီပွီး အိမျကိုစှနျ့ခှာပွေးခဲ့ရတဲ့ အကွောငျးကို ပွောပွလာတဲ့ ခဈြသုဝနေဲ့ […]
ဒီကနေ့လေးမှာ အသက် ၄၂ နှစ်ပြည့်သွားပီဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့မင်းသား ပြေတီဦး…
ဒီကနေ့လေးမှာ အသက် ၄၂ နှစ်ပြည့်သွားပီဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့မင်းသား ပြေတီဦး ရဲ့မွေးနေ့လေး The post ဒီကနေ့လေးမှာ အသက် ၄၂ နှစ်ပြည့်သွားပီဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့မင်းသား ပြေတီဦး… appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
ပထမဆုံးသားဦးလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံစံလေးတွေကို မျှဝေလာတဲ့ အောန်ဆိုင်းရဲ့ ခင်ပွန်း
ပထမဆုံးသားဦးလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံစံလေးတွေကို မျှဝေလာတဲ့ အောန်ဆိုင်းရဲ့ ခင်ပွန်း The post ပထမဆုံးသားဦးလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံစံလေးတွေကို မျှဝေလာတဲ့ အောန်ဆိုင်းရဲ့ ခင်ပွန်း appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
နဒှေေးရဲ့မှေးစားဖို့တောငျးဆိုလာတဲ့အသကျ ၇၀ကြျော အဖှားရဲ့ မွေးလေး
လူရှငျတျောမိုးစကျမှ အ ခကျ အခဲဖွဈ နတေဲ့သူတှကေို ကူညီလှူဒါနျးပေးနရေငျး အခုလို အိုးတိုကျခှဲပွာရောငျးနတေဲ့ မွေးအဖှားနှဈယောကျကို တှရှေိ့ခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဖှားအသကျမှာ ၇၀ ဖွဈပွီး မွေးလေးရဲ့ မိဘ နှဈပါးစလုံးမှာလညျး မရှိတော့ကွောငျးအဖှားမှ လူရှငျတျော မိုးစကျကို ပွောလာပါတယျ။ ကောငျလေးရဲ့ မိခငျမှာ တရုတျ […]
စတိုငျမိမိ ခတျ မိုကျ မိုကျ ဒီဇိုငျးလနျးလနျး ပုံတှကေို တငျပေးလိုကျတဲ့ စတေဈလုံးမောငျဘုနျး ဇာတျလမျး ထဲ က သရုပျ ဆောငျမငျး ဘုနျးမွတျ
အရမျးခဈြရတဲ့ သမီးလေးကိုမေးလိုကျတဲ့အခါ ပွနျဖွလေိုကျတဲ့စကားလေးကွောငျ့ ပီတိဖွဈနတေဲ့ ဇူးဇူးမောငျ
စဈရှောငျပွညျသူတှအေတှကျ အားပေးစကားပွောခဲ့တဲ့ ခဈြသုဝနေဲ့ မွနှငျးရညျလှငျ၂ယောကျလုံးကိုအရမျးခဈြတယျ
ဘဝမှာ အကြီးမားဆုံး လောကဓံကိုကြုံခဲ့ရပြီးနောက် အဖြစ်အပျက်တွေကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း…
ပွငျးထနျစှာခံစားနေ ရတဲ့ ညီမဖွဈသူ မတေငျ မောငျဆနျးဝငျးရဲ့ လကျရှိ ကနျြးမာရေး